Beelo Soomaaliyeed oo kala qaatay magta 41 nin oo ay kala dileen – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
← Maxkamada darrada Koowaad ee ciidamada Qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal lala xiriirinayay Qaraxii 14kii October ee sanadkii hore ee ka dhacay Isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Maxkamada ayaa tan wixii ka danbeeyay Qaraxaasi ku howlaneyd baarista sidii uu u dhacay Qaraxa iyo waliba dadkii ka danbeeyay waxaana ay ugu danbeyntii riday xukunno isugu jira, dil, xabsi daa’in, xarig, iyo eedeysanayaasha qaar oo la sii daayay kaddib markii danbe lagu waayay: Maxkamada ayaa Xasan Aadan Isaaq Cali ku riday xukun dil toogasho ah. C/laahi Ibraahin Xasan Absuge oo maqan waxaa lagu xukumay Xabsi daa’in. C/Wali Axmed Diiriye waxaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ciidan ah. Maxkamada ciidamada waxa ay fasaxday eedeysanayaasha kala ah Muqtaar Maxamuud Xasan Rooble iyo Cabdul Cabdi Warsame Cali oo wax dambi ah lagu waayay. Qaraxii Zoobe ayaa waxaa ku nafwaayay dad tiradooda kor u sii dhaaftay 500 oo ruux, waxaana la oran karaa waa Qaraxii ugu cuslaa ee sanadihii ugu danbeeyay ka dhaca guud ahaan marka la eego caalamka.
UK oo wafti xildhibaano ah oo xaqiiqo raadin ah u dirtay Google iyo Twitter →